အနောက် ကင်မရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ ဖုန်းကို LG ဖန်တီးနေသလား ? – Myanmar Mobile App
ဖုန်း ခေတ်ဦးမှာတော့ ကင်မရာများ မပါကြပါဘူး။ အခုတော့ ကင်မရာ ၂ လုံး၊ ၃ လုံးတပ် ဖုန်းတွေ ထွက်လာပါပြီ။ မကြာသေးခင်ကပဲ အနောက်ကင်မရာ ၄ လုံးတပ် ဖုန်းကို ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကင်မရာ ၅ လုံးပါတဲ့ Nokia ရဲ့ ဖုန်း သတင်းဟာလည်း မကြာခင်က ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းရဲ့ ကင်မရာ အရေအတွက်ထက် ၃ ဆ ပိုများတဲ့ ဖုန်းကို LG က ဖန်တီးနေတဲ့ သတင်း ထွက်လာပါတယ်။
LG က မကြာသေးခင်က အမေရိကန် Patent နဲ့ Trademark Office မှာ အနောက်ကင်မရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ ဖုန်းကို မှတ်ပုံတင်လိုက်ပါတယ်။ ကင်မရာများရဲ့ Focal Lengths နဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များဟာ ကွဲပြားပါတယ်။ ဒီလို ကင်မရာများစွာ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် ထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ ကင်မရာ Effects များကို ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအားဖြင့် ကင်မရာ ၁၆ လုံးက တစ်ပြိုင်နက်ထဲ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပေးနိုင်ပြီး အဲဒီအထဲက အကောင်းဆုံးကို သင်က ရွေးချယ်နိုင်မှာပါ။ မြင်ကွင်းကျယ် ဓါတ်ပုံများကိုလည်း ရိုက်ကူးပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ခံမှုန်ဝါးတဲ့ ဓါတ်ပုံများဟာလည်း အလွန် တိကျသေသပ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံ တစ်ခုကိုတောင် ဗီဒီယို သို့မဟုတ် GIF အဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးပြီးတော့မှ Focus ကို ပြန်လည် သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
LG က စမတ်ဖုန်း ကင်မရာများကို တီထွင်စမ်းသပ်တဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကျော်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မြင်ကွင်းကျယ် ဖုန်း ကင်မရာဟာ စွမ်းရည်မြင့်မားပါတယ်။ 52MP Photo များကို ဖမ်းယူပေးနိုင်ပြီး ကင်မရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ Light L16 Portable Camera ကို ထုတ်လုပ်ပေးထားပါတယ်။ LG ရဲ့ အနောက် ကင်မရာ ၁၆ လုံးတပ် စမတ်ဖုန်းဟာ တကယ် ဖြစ်လာမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အနောကျ ကငျမရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ ဖုနျးကို LG ဖနျတီးနသေလား ?
ဖုနျး ခတျေဦးမှာတော့ ကငျမရာမြား မပါကွပါဘူး။ အခုတော့ ကငျမရာ ၂ လုံး၊ ၃ လုံးတပျ ဖုနျးတှေ ထှကျလာပါပွီ။ မကွာသေးခငျကပဲ အနောကျကငျမရာ ၄ လုံးတပျ ဖုနျးကို ကွညောခဲ့ပါတယျ။ ကငျမရာ ၅ လုံးပါတဲ့ Nokia ရဲ့ ဖုနျး သတငျးဟာလညျး မကွာခငျက ထှကျပျေါခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဖုနျးရဲ့ ကငျမရာ အရအေတှကျထကျ ၃ ဆ ပိုမြားတဲ့ ဖုနျးကို LG က ဖနျတီးနတေဲ့ သတငျး ထှကျလာပါတယျ။
LG က မကွာသေးခငျက အမရေိကနျ Patent နဲ့ Trademark Office မှာ အနောကျကငျမရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ ဖုနျးကို မှတျပုံတငျလိုကျပါတယျ။ ကငျမရာမြားရဲ့ Focal Lengths နဲ့ လုပျဆောငျခကျြမြားဟာ ကှဲပွားပါတယျ။ ဒီလို ကငျမရာမြားစှာ ပေါငျးစပျထညျ့သှငျးထားခွငျးဖွငျ့ ထူးခွားဆနျးသဈတဲ့ ကငျမရာ Effects မြားကို ဖနျတီးပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဥပမာအားဖွငျ့ ကငျမရာ ၁၆ လုံးက တဈပွိုငျနကျထဲ ဓါတျပုံ ရိုကျပေးနိုငျပွီး အဲဒီအထဲက အကောငျးဆုံးကို သငျက ရှေးခယျြနိုငျမှာပါ။ မွငျကှငျးကယျြ ဓါတျပုံမြားကိုလညျး ရိုကျကူးပေးနိုငျပါတယျ။ နောကျခံမှုနျဝါးတဲ့ ဓါတျပုံမြားဟာလညျး အလှနျ တိကသြသေပျလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ရုပျသေ ဓါတျပုံ တဈခုကိုတောငျ ဗီဒီယို သို့မဟုတျ GIF အဖွဈ ဖနျတီးပေးနိုငျပါတယျ။ ဓါတျပုံ ရိုကျကူးပွီးတော့မှ Focus ကို ပွနျလညျ သတျမှတျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
LG က စမတျဖုနျး ကငျမရာမြားကို တီထှငျစမျးသပျတဲ့ နရောမှာ နာမညျကြျောပါတယျ။ သူ့ရဲ့ မွငျကှငျးကယျြ ဖုနျး ကငျမရာဟာ စှမျးရညျမွငျ့မားပါတယျ။ 52MP Photo မြားကို ဖမျးယူပေးနိုငျပွီး ကငျမရာ ၁၆ လုံးပါတဲ့ Light L16 Portable Camera ကို ထုတျလုပျပေးထားပါတယျ။ LG ရဲ့ အနောကျ ကငျမရာ ၁၆ လုံးတပျ စမတျဖုနျးဟာ တကယျ ဖွဈလာမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာ ဖွဈပါတယျ။
GeekBench မှာ iPhone XS ထက် ရမှတ် နည်းသွားတဲ့ Samsung Galaxy S10
Samsung က Galaxy S10 Series များကို တရားဝင် မကြေညာရသေးပါဘူး။ လာမယ့်လ ၂၀ ရက်နေ့ကျမှသာ မိတ်ဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ သတင်းအချက်အလက်များဟာ GeekBench ကနေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ Snapdragon 855 Chipset ထည့်သွင်းထားတဲ့ မော်ဒယ် မဟုတ်ဘဲ တောင်ကိုရီးယားမှာ ရောင်းချမယ့် Exynos 9820 Chipset ထည့်သွင်းထားတဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်ပါတယ်။ GeekBench ရဲ့ Single-core Test မှာ Galaxy S10 ဟာ iPhone XS Max ရဲ့ အောက်မှာ ဒုတိယနေရာကနေ ရပ်တည်နေပါတယ်။ သူဟာ အခြား အန်းဒရွိုက်ဖုန်းများထက်တော့ အမှတ်များနေပါတယ်။ Kirin 980 နဲ့ […]
Posted on October 1, 2018 Author Ko Nyi